John Dryden. Makore 320 mushure mekufa kwake. Mitsara uye nhetembo | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo nemufananidzo weGerman Gottfried Kneller. National Gallery muLondon.
John wakaoma anga ari mudetembi, munyori wemitambo uye mutsoropodzi wemabhuku, uye zvakare chimiro chikuru nguva yekunyora ye Chirungu kudzoreredza yaCarlos II. Muchokwadi, yakazozivikanwa se Nguva yakaoma. Nhasi zvazadzikiswa 320 makore zvekufa kwake. Ini ndinoongorora hupenyu hwake uye ndosarudza mamwe mitsara nezvidimbu zvemabasa ake.
1 John wakaoma
2 Mitsara yakasarudzwa
3 Ode kuna Saint Cecilia (chidimbu)
John wakaoma akaberekerwa mu Aldwinkle (Northamptonshire) muna 1631 mumhuri yePuritan ine vana gumi nevana.
Ini ndinodzidza mu Westminster Chikoro and the Trinity College kubva kuCambridge, uye aishanda London pamwe neMunyori weNyika Cromwell. Asi kubva paudiki kwazvo akatanga kuburitsa nhetembo.
Ndakaroora ne Elizabeth elizabeth howard uye aive nevana vatatu uye akanyora mitambo mushure mekuvhurwa kwemitambo, yakavharwa nemutemo wePuritan. Navo, kunze kwemabhenefiti akanaka, akaisa maitiro uye masitayera aizove akasiyana mukufona Comedy yeKudzoreredza. Nekudaro akawanawo kuzivikanwa semumwe wevanonyanya kukosha vatambi vemitambo munyika. Uye zvakare yakaratidza kuti sei muturikiri wekare ChiLatin uye chiGiriki.
Mamwe emabasa ake ane mukurumbira aive:
Mabasa aVirgil, menduru, Kugamba kwehumhare, Dutu, Rondedzero pane nhetembo dzinoshamisa, Abhusaromu naAjitoferi (nemaungira akajeka aJohn Milton neake Yakarasika paradhiso), Masikati rudo, Mambo weIndia, Kukundwa kweGranada, Mufashoni muchato, Zvese zverudo, Doe uye panther kana rake Ode kuna Saint Cecilia.
Akafa Chivabvu 12, 1700 uye Masarasara ake anozorora mukona yakakurumbira yevanyanduri ve Westminster abbey muLondon.
Imba yacho inofanirwa kunge iri nzvimbo inoyera yehupenyu.
Zvikanganiso, sezvakaita mashizha, zvakarasika munyika; Kana iwe uchida kutsvaga maparera, iwe unofanirwa kuenda wakadzika kwazvo.
Iyi ndiyo ivhu revhu revanhu.
Rudo ndiko kushaya simba kwakadzama kwemweya.
Kupenga ndiko kumwe kunakidzwa kunozivikanwa nebenzi chete.
Munhu chete ndiye anotadzisa mufaro nekuparadza izvo zvinogona kuve chaizvo.
Marwadzo erudo anotapira kwazvo kupfuura mamwe mafaro ese.
Humambo hwese hachisi chinhu asi simba riri mukutendwa.
Hupfumi hwake hwaive hukuru, asi moyo wake waive mukuru.
Haanzwe njodzi, nekuti haazive kutadza.
Ini ndakuvara zvishoma, asi handina kufa. Ndicharara pasi kuti ndibude ropa kwekanguva. Ipapo ndichasimuka kuti ndirwisane zvakare.
Iko kufara kwese kunogona kuwanikwa neHumanity hakusi mukunakidzwa, asi mukuzorora kubva pakurwadziwa.
Ode kuna Saint Cecilia (chidimbu)
Yakanga yakanyorwa mukati 1687 kutumwa ne London Musical Society uyo anga atoronga makore mashoma apfuura mutambo wepagore waNovember 22, mukuremekedza iyo mutariri mutsvene wemimhanzi.
Iyi nhetembo, inosimudzira iyo mimhanzi simba kuti uwane kubatana munyika izere nenyonganiso uye inotikoka kuti tizvinzwe zvizere muhupenyu hwedu. Munyori Friedrich Handel isa mimhanzi muchimiro che cantata en 1739.
Ndeipi shungu isingamutse uye isingatonge?
Kana kubwinya kwajubal
Rudimbwa rwenziyo dzakaita tambo,
Vakoma vake vakamuteerera,
Uye kunyange guruva pahuma rakakotama
Kuremekedza changamire huroyi.
Izvo zvisingasviki pane mwari ivo vakafungidzira
Chengetedza izvo kushamisika
Kuti akataura kwavari nemweya unotapira kudaro.
Tumira bellicose nyanga
Kuti chivharo chatovhunika,
Uye hasha dzinowedzera, nehondo
Dutu ripi rinotsemuka.
Kudzokororazve, kuwanda kwakatanhamara
Kurudzira varwi vakasindimara,
Enderera mberi! enderera mberi! achidzokorora.
Kubva kune anonyara anofarira,
Izvo izvo tariro inochema.
Akataura vayolin anoratidza
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » John Dryden. Makore 320 mushure mekufa kwake. Mitsara uye nhetembo